Philips wuxuu cusbooneysiiyaa kala duwanaanta Hue inta lagu jiro IFA 2019 | Wararka IPhone
Philips waxay isu taagtay inay tahay mid ka mid ah noocyada ugu wanaagsan marka la eego nalalka caqliga badan, gaar ahaan markay tahay iswaafajinta HomeKit. Si tartiib tartiib ah ayey u soo fiicnaaneysaa oo u weyneyneysaa buug-yaraheeda si loo wajaho tartanka sii xoogeysanaya ee weligiis sii xoogaysanaya Sidaad ogtahayba, mid kamid ah carwooyinka caalamiga ah ee macaamiisha elektaroonigga ah ee sanadka waxaa lagu qabtaa Berlin, waxaan kahadleynaa IFA. Intii lagu guda jiray dhacdadan Philips waxay go'aansatay inay cusboonaysiiso noocyadeeda kala duwan ee wax soo saarka nalalka caqliga leh oo leh taxane ah alaabooyin xiiso leh bal aan eegno warkooda oo dhan.
Waxa ugu horreeya ee uu Philips ku daro waa moodada ah nalalka leh fiilooyinka LED-ka ee qaabka Edison ugu nadiifsan. Nalalkaani waxay u yimaadaan inay qanciyaan baahiyaha beddelka ugu badan, waana in nalalkaasi yihiin kuwo aad moodada. Way cadahay inaysan ahayn guluubyada nooca Edison ee dhabta ah, laakiin inay u ekaysiinayaan iyadoo la adeegsanayo fiilooyin laakiin dhab ahaantii kuwani waa LED-yada. Nalalkaasi waa ku kici doonaan inta udhaxeysa 25 iyo 35 euro iyadoo kuxiran astaamaheeda, iyadoo la raacayo alaabada guud ee Hue. Xaaladdan oo kale waxaan dooran karnaa oo keliya nalalka diiran oo aan lagu hagaajin karin midab laakiin xoog.
Nalalkii ugu dambeeyay uguna fiicnaa uguna #PhilipsHue ayaa soo socda goor dhow. Fiiri qarsoodi ah qaar ka mid ah sii deyntayada cusub! #SmartLighting #SmartHome pic.twitter.com/j6Ty9GdjZY
- Philips Hue (@tweethue) September 5, 2019
Ma aha wax cusub, Philips wuxuu kaloo furay badhanka Smart, oo ah batoon yar oo aan dhigeyno meelkasta oo aan dooneyno wuxuuna noo ogolaanayaa inaan nalalka shidno oo aan damino, oo xitaa xakameynaya xoogeeda adoo ka tagaya badhanka la riixay, oo ah beddel xiiso leh oo loogu talagalay badhanka weyn ee hadda jira. Badhankaani yar wuxuu ku kacayaa kudhowaad 20 euro, wuxuu ka kici doonaa wax ka badan 16 euro caadiga ah ee bedelka hadda, kaas oo sii wadi doona iibka.
Ugu dambayntii waxaan kaloo arki doonnaa badeecooyin cusub oo aan dhowaan la iibin doonin laakiin horay loo sii sheegay, iyo sidoo kale kan hagaajinta nambarka hadda jira ee nalalka GU10 ee leh Bluetooth, iyo sidoo kale laambadaha «shumaca», taas oo ka fiicnaan doonta xagga tamarta fudud iyo isticmaalka:
Nal cusub oo wax lagu cabbo Philips Hue Go wuxuu ku kacayaa 79,99 euro la jaan qaada Kaaliyaha Google, Alexa iyo HomeKit.
Nuevo Xannibaadda Smart, fiilo xariif ah oo casri ah, oo aan lahayn astaamo gaar ah, 19,99 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Philips wuxuu cusbooneysiiyaa kala duwanaanta Hue inta lagu jiro IFA 2019
Apple waxay dhibaato ku qabtaa mar labaad warshadeeda ku taal Shiinaha